About Us - Nanjing Jianke Makiinado Co., Ltd
Nanjing Jianke Makiinado Co., Ltd ayaa si tartiib tartiib ah mid ka mid ah bixiyeyaasha top of warshadaha qalab mashiinka ee dunida ugu soo galay. La asaasay 1993, JIANKE diiradda saarayaa soo saarta nooca Swiss-lathe si toos ah wax soo saarka ka mid ah qaybaha biraha yar yar, adag oo sax waqtiga oo dhan.
Ilaa hadda, waxaan leenahay saddex nooc oo ah nooca Swiss-lathe si toos ah, taxane Z, M taxane oo taxane W, taasoo ka dhergin kari lahaa baahida caalamiga ah ka soo beeraha oo kala duwan: aerospace, military, caafimaadka, qaybo auto, iwm.
All mashiinada JIANKE ku salaysan yihiin technology ugu dambeeyay iyo qaybaha, sida saa'idka dunmiiqa, hanuunin rail iyo Howlsocodsiinta matoorrada si toos ah ay yihiin ganacsatada ka top caan ah. Ridaya sariirta iyo qaybaha yihiin machined by our warshad gaar ah si loo hubiyo in tayo wanaagsan leh.
JIANKE ku adkaysanayaan on goolka of "eryan waxyaabaha fiican, adeegtaan suuqyada caalamka". Injineerada Our doonaya in ay kor u qaadista heerka mashiinka, sax mashiinka ammaanka iyo mashiinka. injineerada Codsiga waxaa ka go'an in ay caawiyaan dadka macaamiisha noo ah ka heli fiicnayn ee off-the-shelf ama caadada qaybiyay xal mashiinka JIANKE CNC in samatabbixin oolnimada-soo-saarka ugu badan iyo kharash-kayd.
Iyada oo ku saleysan falsafadda ganacsiga ee "tayada ugu horeysay, sumcad ugu horeysay", JIANKE waxaa ka go'an in uu bixiyo waxyaabaha la isku halayn karo, adeeg kaamil ah, xal xirfadeed.
Cinwaankaaga: 72, Fengshan Road, Gaochun Zone Horumarinta Dhaqaalaha, Nanjing, Shiinaha